အတိုင်ပင်ခံ – အိမ်ထောင်အရပြောရရင် မင်းကို ချစ်နေတဲ့ အချစ်ကို သူမ ပိုင်ဆိုင်နေမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအိမ်ထောင် မှာ မင်းက သူ့ကို ချစ်တဲ့ အချစ် မင်းမှာ မရှိတော့ဘူး။
မင်းကတခြားတစ်ယောက်ကို မင်းရဲ့အချစ်တွေပေးလိုက်လို့။ မင်း သူ့ကို မချစ်တော့တဲ့ အတွက် မင်းဆုံးရှုံးနေတာ နာကျင်မှာ မင်းပဲ။
အတိုင်ပင်ခံ – ဒီဖယောင်းတိုင် ၃ တိုင်သာ မိန်းကလေး ၃ ယောက်ကို ကိုယ်စားပြုနေမယ်ဆိုရင် ဒီ လူ့လောကမှာ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရှိတယ်။
အခု မင်းချစ်နေတဲ့ တစ်ယောက်က မင်းရဲ့ နောက်ဆုံးချစ်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာကိုမင်း ပြောနိုင်လား။
အတိုင်ပင်ခံ – မင်းခုနက ယူလိုက်တဲ့ ဖယောင်းတိုင်က မင်းလက်ရှိ မိန်းမကို ကိုယ်စားပြုမယ်ဆိုရင် အချစ်ဆိုတာ ရင်ထဲက ဖြစ်လာတဲ့ အတွက် မင်း သူ့ကို ချစ်နေရင် မင်းစိတ်ထဲမှာ သူဟာအလင်းဆုံး မင်းသာ သူ့ကို စိတ်ထဲမှာ မထားဘူး ။
နဂိုနေရာမှာဆိုရင် မင်းစိတ်ထဲကို မထည့်တဲ့ အတွက် အလင်းဆုံးကို မင်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။
ချစ်တယ် မချစ်တယ် ဆိုတာ မင်းရဲ့ စိတ်ပါပဲ။
ဒီ လူ့လောကကြီးမှာ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတဲ့ တံတိုင်းကြီးပေါ့… တံတိုင်းထဲ နဲ့ တံတိုင်းပြင် ပေါ့။ အပြင်မှာ ရှိနေတဲ့ သူတွေက အထဲဝင်ချင် အထဲမှာရှိတဲ့ သူက အပြင်ထွက်ချင်။ အထဲမှာ ရှိတဲ့ သူတွေကလဲ အပြင်ဘက်က ရူ့ခင်းတွေကို ကြည့်ချင်။ ရထား ပိုင်ဆိုင်ထားတာတွေနဲ့ မကျေနပ်ကြဘူး။ မရောင့်ရဲကြဘူး။ မိုးပေါ်ကကြယ်လေးတွေ
လင်းလက်နေတာကို မက်မောကြတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်မှာ နွေးထွေးတဲ့ ဟင်းနဲ့ စောင့်နေတာကို မမြင်ကြဘူး။ သာမာန်ရိုးကျ နေ့စဉ်လုပ်ရပ်တွေကို ငြီးငွေ့လာတယ်။အချစ်သစ်ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို မက်မောလာတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကို အဝေးမှာပဲ ထင်ပြီး နောက်တစ်ယောက် လာခေါ်ဆောင်မှုကို စောင့်စားနေတယ်။.
တစ်ချို့အရာတွေက မသိစိတ်ကနေ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်… စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်လာတဲ့ အတိုင်း လုပ်ကြတယ်…..
ဒီလိုနဲ့ ပဲ ဖေါက်ပြန်မှုတွေက များပြားလာတော့တာပေါ့…….
အတိုငျပငျခံ – အိမျထောငျအရပွောရရငျ မငျးကို ခဈြနတေဲ့ အခဈြကို သူမ ပိုငျဆိုငျနမေယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီအိမျထောငျ မှာ မငျးက သူ့ကို ခဈြတဲ့ အခဈြ မငျးမှာ မရှိတော့ဘူး။
မငျးကတခွားတဈယောကျကို မငျးရဲ့အခဈြတှပေေးလိုကျလို့။ မငျး သူ့ကို မခဈြတော့တဲ့ အတှကျ မငျးဆုံးရှုံးနတော နာကငျြမှာ မငျးပဲ။
အတိုငျပငျခံ – ဒီဖယောငျးတိုငျ ၃ တိုငျသာ မိနျးကလေး ၃ ယောကျကို ကိုယျစားပွုနမေယျဆိုရငျ ဒီ လူ့လောကမှာ မရမေတှကျနိုငျတဲ့ မိနျးကလေးတှရှေိတယျ။
ဒီ ၃ တိုငျတောငျ ဘယျတိုငျက ပို လငျးပွီး တောကျပ နတေယျဆိုတာ မငျးမပွောနိုငျဘူး။
အခု မငျးခဈြနတေဲ့ တဈယောကျက မငျးရဲ့ နောကျဆုံးခဈြနိုငျတဲ့ မိနျးကလေးဆိုတာကိုမငျး ပွောနိုငျလား။
အတိုငျပငျခံ – မငျးခုနက ယူလိုကျတဲ့ ဖယောငျးတိုငျက မငျးလကျရှိ မိနျးမကို ကိုယျစားပွုမယျဆိုရငျ အခဈြဆိုတာ ရငျထဲက ဖွဈလာတဲ့ အတှကျ မငျး သူ့ကို ခဈြနရေငျ မငျးစိတျထဲမှာ သူဟာအလငျးဆုံး မငျးသာ သူ့ကို စိတျထဲမှာ မထားဘူး ။
နဂိုနရောမှာဆိုရငျ မငျးစိတျထဲကို မထညျ့တဲ့ အတှကျ အလငျးဆုံးကို မငျးတှမှေ့ာမဟုတျဘူး။
ခဈြတယျ မခဈြတယျ ဆိုတာ မငျးရဲ့ စိတျပါပဲ။
တဈခြို့အရာတှကေ မသိစိတျကနေ စိတျထဲမှာ ဖွဈပျေါလာတယျ… စိတျထဲမှာ ဖွဈလာတဲ့ အတိုငျး လုပျကွတယျ…..
ဒီလိုနဲ့ ပဲ ဖေါကျပွနျမှုတှကေ မြားပွားလာတော့တာပေါ့…….